TY320-3 cagaf-cagaf-ku-gudbi waa la hakiyay, wareejinta hawo-biyoodka, cagaf-cagaf-cagafeedka nooca gacanta haydarooliga ah. Planetary, gudbinta wareejinta korontadu taas oo ay maamusho Unilever. Nidaamka hawlgalka ee loo qaabeeyey si waafaqsan injineernimada bini'aadamka iyo mashiinka ayaa ka dhigaya hawlgalka si sahlan, hufan oo sax ah.
●A CUMMINS NTA855-C360S10 engine wuxuu ku siinayaa awood dheeraad ah iyo isku halaynta aad u baahan tahay. Mashiinnada qiiqa qiiqa, waxay wali si caadi ah ugu shaqayn kartaa joogga 4,300 mitir.
● Gudbinta wareejinta awoodda aadka la isku halleyn karo, beddelka wareegtada deggan iyo qaab dhismeedka iligga-tooska ah ee labada marxaladood ee ugu dambeeya waxay u gudbiyaan awoodda si hufan.
● Iyada oo haanta biyaha qaboojinta madax banaan, qaboojiyaha saliidda chassis, biyaha iyo hawada intercooler waxay bixisaa waxqabad qaboojin oo aad u fiican iyo hawlgalka dayactirka fudud si loo hubiyo in si joogto ah u shaqeeyo mashiinka.
●Wadawaynta ugu danbeysa waa mid hoosaysa waxana ay siisaa xoog wadida oo awood badan iyo darajooyin hufan.
●Dabka tit-tooska ah ee caadiga ah waxa uu leeyahay awood goyn oo awood badan iyo ripper-ka-culus ee culus waxa lagu qalabayn karaa dooxidda dhoobada iyo dhulka barafaysan, oo leh hufnaan shaqo oo sarreeya iyo xoog gelis aad u xooggan.
Dozer: Daab Toosan oo leexleexan
Miisaanka hawlgalka (Kg): 37200
Cadaadiska dhulka (MPa): 0.105
Qiyaasta raadraaca (mm): 2140
Heerka sare: 30°/25°
Nadiifinta dhulka (mm): 500
Cabbirka Dozing (mm): 4130×1590
Max. qoto dheer qodista (mm): 560
Cabirka guud (mm): 6880×4130×3725
Awoodda la qiimeeyay (KW): 257
Tirada dhululubo-dhalatay× stroke (mm): 6-139.7×152.4
Habka bilawga ah: Koronto ka bilaabma 24V 11kW
Tirada Rollers Carrier (dhinac kasta): 2
Tirada Kabaha Raadka (dhinac kasta): 41
Dhererka raadraaca (mm): 228.6
Horey (Km/h) 0-3.6 0-6.6 0-11.5
Dib u dhac (Km/h) 0-4.4 0-7.8 0-13.5
(MPa) Cadaadiska shaqada (Mpa): 14
Barokaca (L/min): 355
Beddeliyaha Torque: 3-element, 1-marxalad, 1-waji
Gudbinta: Qalabka Planetary, Xajmiga-disc-ka badan, Haydarooliga Firfircoon, Saliid qasab ah oo lagu shubayo Gear, 3 xawli hore ah iyo 3 xawaarayaal rogaal celis ah.
Xajinta isteerinka: Qoyan, xajin saxan oo badan, guga raray, habaysan oo firfircoon.
Biriiga isteerinka: qoyan, bireega band, lagu shaqeeyo xoojiye haydarooliga iyo isku xidhka
Wadista kama dambaysta ah: Spur gear, laba jibbaar dhimis, saliid saydhayn.
Hore: TY230-3 bulldozer
Xiga: SWMC-360-DTH gurguurta kala go'ay oo ku rakiban haydarooliga hoos-u-godka godka